Pharmaceutical Glass yentsha
Crimp Intamo Glass ezineengqayi
Screw Intamo Glass ezineengqayi
Glass ityhubhu yovavanyo
tube Ibhotile Glass
Oil Kubalulekile Ukupakisha Glass ezineengqayi
Flat ezineengqayi iglasi cap phezulu
yentsha iglasi dropper
Roll on yentsha iglasi
Amafutha Ukupakisha Glass ezineengqayi
Glass Storage ezityeni
yentsha iglasi Tubular evela iimveliso zeglasi Xuzhou Erose Co., ltd.
ngomphathi ku 19-05-10
Izicelo / Amacandelo: wezenzi •, eendaba igazi kunye nokuvavanywa, uhlalutyo umchamo. • injectables Human, idosi ulwelo ngomlomo, nihluthe owomileyo, iimveliso zempilo yezilwanyana. • samplers Amafutha, uqala imveliso ivumba, ingongoma lwentengo, nezipho counter mhle. • kaMasipala & uvavanyo amanzi zabucala, en ...
Yintoni na iglasi borosilicate?
Yintoni na iglasi borosilicate? Wakhe wazibuza ukuba kutheni ezinye iglasi angaya ukusuka freezer ukuba liziko lezonka, nokuba umva kwakhona elixa abanye abakwazi? Inkcazelo ngokucokisekileyo lungafuna kwisiqingatha physics, ukufunda ngokunxulumene ukuxinana ngayo ingqibelelo noshowo kunye okuza bemisa thermal, kodwa elifutshane ...
borosilicate eliphezulu yokugcina iglasi ingqayi ne isivalo isiciko okanye bamboo iinkuni lid
ngomphathi ku 19-04-29
Isilinda kwizikhongozeli Yazo Lid okanye Bamboo iinkuni Lid canisters Glass zokungenisa kunye ezineziciko oki okanye bamboo iinkuni lid, asenokungakulungeli ukugcina cookie, iilekese, umgubo, iimbotyi, iziqholo, iisiriyeli njl ekhanyayo ikuvumela ukuba ubone yintoni Umphanda ngamnye, ukwenza ukuchongwa imixholo lula. Multi-njongo, Bea ...
Glass tube ne isivalo enesiciko
ngomphathi ku 19-04-26
Iglasi tube ne isivalo isiciko isoloko isetyenziswa yi iilebhu, kodwa uvavanyo tube ne isivalo ngesiciko okanye nabanye lukwasetyenziswa ziqulathe ezinye iziqholo ezifana imidumba vanilla ukuze bagcine konke incasa kunye nevumba. Ezinye ngemibhobho yeglasi iziciko nazo izinto zokuhombisa olunyulu ukubonisa isanti, iilekese o ...
Glass ezineengqayi babe indawo ebanzi usebenzisa
yentsha Glass Round kumashishini kwezenzululwazi zoxubo mayeza na umgangatho kuba umthamo wabo ebamb, kunye nohlobo egalelwe yeglasi. Laboratories usoloko usebenzisa ezineengqayi zeglasi ezincinane ukwenzela uvavanyo imichiza nokugcina. neentwana amayeza ngokuphepha kuthunyelwa ezineengqayi yeglasi ...
ingqayi Borosilicate yokugcina negilasi ukhetho best ukubonisa imveliso yakho evenkileni, isiganeko esikhethekileyo, okanye njenge ukhetho sopakisho for top-yencwa- kunye egciniweyo strains.
xuzhou, Jiangsu kwiPhondo, China